မသိဘဲယောက်ျားနဲ့ soulless ၏လက်၌ဟေတီနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ
10 ဇူလိုင်လ 2018 Belz Mundo 5
ဥပမာ STATE ရှေ့နေချုပ် DOMINICANO
မြင်ခြင်း, ကြားခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပျက်တဲ့ Dantesque ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအကျိုးဆက်များခံရ, လွင်ပြင်, ရိုးရှင်းပြီးတကယ်အတွက်ကြီးမားခွန်အားမရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြိုချနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဟေတီ အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်၏လမ်းမများပေါ်တွင် undersell သောနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးခံယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့လက်လှမ်းရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ကျည်ဆံတွေသို့မဟုတ်ဓါးတွေနဲ့ခုတ်သေဖို့အန္တရာယ်ယူသောသူတို့က, အကြားခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အယူသီးနှင့်လူကြိုက်များအဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း ဆိပ်ကမ်းကို-au-Prince အရာရှိများနှင့်စစ်တပ်လူရမ်းကား, မသာ insolidaridad လက်ရှိအစိုးရ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်လာသည်, အနိုင်အထက်လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းဖြင့်အတားအဆီးတွေနဲ့မီးအကြားဖြစ်ပွားယနေ့တုံ့ပြန်မှုကျော်လွန်ရှို့နိုင်သောမဟုတ်ဘဲတစ်ဦး devilish လမ်းဆုံ, တစ်ခုခု extension ကိုနီးကပ်ဖြင့်လည်းတစ်ဦးလောင်မီးအဖြစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအကောင့်ထဲသို့အဓိကအားဖြင့်သူတို့အားခံစားချက်တွေကိုသေးရှင်းလင်းစွာတွေ့ကြုံခံစားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအလိုတော်ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်းထို့နောက်ဖွစျနိုငျသောအရာကို၏အံ့သြဖွယ်အမြင်ယူပြီးမထိန်းချုပ်သရုပ်ပြမရှိခြင်းနှင့်အတူကစားမယ့်ဒိုမီနို effect ကိုပုန်းကွယ်သောစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုသိရန်လိုမ သူတို့တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုနှင့်အတူဖောက်ပြန် arramblan နှင့်ပြီးသားဂီတ "Creole" မကျေနပ်မှုကိုကြားနေစဉ်မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များအရပ်ဘက်ရောဂါဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာပြန်ထုတ်ပေးပြီးလျှင်, United States ကိုအဘယ်သူမျှမပြန်လာနှင့်အတူတလမ်းလက်မှတ်ရှိသည်သောနိုင်ငံရေးသမားများ၏ရက်စက်စွာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်လာပြီဆက်ဆက်အနေနဲ့နားမလည်ဘချားတာတေးဂီတ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့ပါးပါလိမ့်မယ်။
ငါသည်သင်တို့ကို, ရေးကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်းမနိုင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖုံးအုပ်မျက်နှာကျက်သံချေးတက်သံဖြူနှင့်အတူမျက်နှာကျက်မှပွင့်လင်းသူများ, ဆင်းတယ်, အကြောင်းစကား၌အက္ခရာနှင့်၎င်း၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဖြစ် catacombs ကိုးကားနိုငျသောသူတို့ကို သာ. ကြီးအရှက်ကွဲခြင်းအဘို့အတည်ရှိမနေသင့် ကဲ့ရဲ့ဆက်လက်ကာစွယ်စုံကျမ်း, ကပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဖို့မရည်ရွယ်ပေမယ့်ငါ့ထံသို့အမည်မသိတစ်ဦးဘုရားဆုတောငျးလကျြအပေါ်စောင့်ရှောက်သောလူအများ၏မြေပုံကိုသို့သော်အများကြီးသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူကမမြင်ရကြိုးစားသော, များစွာသောပါဘူးလျှို့ဝှက် ဒီငရဲမှာအနည်းဆုံးကျနော်တို့ပေးနိုင်ကြသည်သောအနည်းငယ်သာများအတွက်ရှယ်ယာအချို့အဆက်မပြတ်ခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအကူအညီမဲ့တဲ့သည်မြေတွင်းထဲသို့ ပို. ပို. နစ်မြုပ်။
ငါစိုစွတ်သောထိတ်လန့်ခြောက်သွေ့ကြောက်ရွံ့အမည်မသိလိုရာခရီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကျင်လည်ကျက်သူတို့တွင်လွတ်လပ်စွာကျင်လည်အစစ်အမှန်ထိတ်လန့်အကြားရောနှောနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရောင်၏အခြားဖြစ်လျက်ရှိစစ်ဆေးမှာ၎င်းတို့၏, စပ်စုကြောက်ခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကြည့်တစ်ချက်ထိန်းထားနိုင်တယ်ပါပြီ တပါးအမျိုးသားသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုအရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလမ်းမှမလွှဲနိုင်မထင်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းကိုပင်ကွယ်ပျောက်ကြောင်းအခြောက်အဘယ်တော့မှတစ်ဦး quagmires ကနေအောင်မြင်ပြီ unmercifully တစ်ဦးအသေသတ်ခြင်း၏အတိုက်အခံအတူဖြစ်စေလမ်းကကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ကြသူကိုအခြားသူများနှစ်ဦးစလုံးနာကျင်။ ထိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမဆုရှင်မအောက်ခံအဆိုးဆုံးပြဿနာတစ်ခုချဉ်းကပ်ထဲကနေ inhibited ထားတဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကကုသခံရဖို့အခါသူတို့မှားယွင်းစွာလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်တတိယကမ္ဘာတွင်မခေါ်ဘာကိုထောက်ပံ့ရပါမည်ထက်ပိုပြီးနာကျင် အရာပြီးသားအရှိဆုံးသော rancor မေ့ရမ်နှင့်ဘီယာအပေါ်ဖြုန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်အစဉ်အမြဲ, အနက်ရောင်အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်အညိုရောင် segments များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်ဆက်စပ်စိတ်ဆင်းရဲပီဆိုအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်မြေထုဆွဲအားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မရှိခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူတို့အထဲမှာကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။
ငါဖုံးကွယ်မရနိုငျသောအတွေးအခေါ်များနှင့်ထိတွေ့ငါပွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်ရှိရာအံ့သြစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါဆက်လက်တိုးပွားဖို့အခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းပြဌာန်းခွင့်များကသူတို့အားများစွာသောမွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးရိပ်မိလိမ့်မယ်အရာ၏အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက် meekly တက်ခွေ ထစ်အငေါ့တ္ထု၏ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏အဝိဇ္ဇာအတွက်အားပေးနှင့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သောတာဝန်ယူမှု, ဘဲ, အလုံအလောက်အဖြူရောင်မြေဖြူတွေသုံးပြီးရေးဆွဲနိုင်ဖယောင်းထဲမှာအဘယ်သူမျှမလုံလောက်ပါတယ်။
အများအပြားချွတ်ယွင်းခြင်းမှကြုံတွေ့နေကြရသည်တဲ့ဥရောပလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ဘို့ငါရှိတယ်ဘယ်လောက်ကံကောင်းဝန်ခံနိုင်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရမ်းပတာ၏အိမ်မှဖြင့်ကာကွယ်ထားအဆင်မပြေမှုကြောင့်ခံစားမှုအားလုံး dissents သူကိုဟေတီနှင့်ဒိုမီနီကန်ကိုယ်တော်တိုင်, အများကြီးစကားပြောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှနှင့် သူတို့အားစုတ်ပြဲခြင်းနှင့်ဘိနပ်မပါသောကလေးများ, အလုပ်သင်ဗီဇ looting စဉ်က listen မယ်လို့ကဒေါ်လာနှင့်ယူရိုအမြဲအပြည့်အဝထိုသူတို့အဘို့လူတထောင်ပီဆိုတစ်အစုစုကိုလမ်းမှမလွှဲနိုင်သောမြော်နိုင်သူလူအပေါင်းတို့အားအိပ်သူတို့ရဲ့ irrepressible အလိုဆန္ဒပြင်ပေးဖို့နည်းနည်းမ တစ်ဦးမှည့်သောငှက်ပျောသီးနှင့်အတူအနောက်တိုင်းအဖြူအပြစ်ရှိတယ်, အခါသမယမှသူ့ဟာသူချေးငှားသည်ဆိုအကြောင်းပြချက်တောင်းသူတို့ကိုသင်ပေးဆောင်ထိုနေ့၏တစ်ခုတည်းသောမုန့်ညက်မျှကြက်သားကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့်ပဲမျိုးစုံနှင့်အတူအချို့သောဆန်အလွန်နည်းပါးလှည့်
အချို့ကနေ့တိုင်းမမြင်ရတဲ့မုန့်သောကြောင့်, ယဇျပူဇျောအကြောင်းကိုငါ့ကိုစကားပြော, ငါ့တိုင်းစက္ကန့်ငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ကိုတားဆီးသောအပွစျဒဏျခဲ့နှငျ့အခွားသောကမ္ဘာနှင့်တစ်ဦးတှငျနထေိုငျသူမြားအပြစ်ပေးတော်မူကြောင်းကိုကြည့်ဖို့အတှကျမနေပါနဲ့ ငါ၏မွငျ့ vantage မှအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင်ငါသည်ဤထင်ယောင်ထင်မှားအသီးအနှံကိုရိတ်ရမှမာန၏အမျိုးအနွယ်ကိုမျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်းဖြင့်အောင်မြင်လျှင်လိုအပ်သောမှတ်ချက်များအဖြစ်ကွာဟမှုအတွက်နောက်လိုက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကန့်သတ်တစ်ခုဖောက်ပြန်သောသူငယ်ကဲ့သို့အကြည့်ရှုပါ။
ငါအိပ်မက်မက်စောင့်ရှောက်, တဦးတည်းအိပ်မက်အိပ်မက်ရှိသည်။ လွတ်လပ်မှု, တရားမျှတမှုအိပ်မက်, တန်းတူညီမျှမှု၏အိပ်မက်နှင့်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့သူတို့ကိုအိပ်မက်မက်ဖို့လိုအပ်ခဲ့၏ Dream ။
ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်အရာကိုမျှရိုးရိုးသားသားအဝိဇ္ဇာနှင့်အသိစိတ်မိုက်မဲထက် ပို. အန္တရာယ်ရှိသည်။
ထိုနှိပ်စက်တာနှင့်အရေးမယူသည့်အတွေး amnesiac ဖြစ်လာပါစေနိုင်သည့်စစ်ပြေးများအတွက်တောင်းပန်ဖို့အနည်းဆုံးအမှတ်, လေယာဉ်များအတွက်အိပ်ပျော်နေသောနှလုံးဆင်ခြေအတွက် urgando, ရောက်ရှိဖို့မသိကြောင်းလာကြတယ်အဖြစ်မှီဝဲနေသည် ပြန်အသက်ဝိညာဉ်သူပုန်များရန်မှတ်ဉာဏ်နှုတ်တော်ထွက်အပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းထွက်ခွာဆက်လက်ခေါ်ဆိုခခေါင်းလောင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ထက်အခြားဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း, အရာအားလုံးထက်ရတဲ့မရှိဘဲတံခါးများပိတ်လိုက်ရသောအခါ။
တီနှင့်ဒိုမီနီကန်အဲဒီမှာအားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်မဖြစ်မနေ secure မှနားလည်သဘောပေါက်ထက်မကတခြားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, ဝယ်လိုအားင့်လင်းမြင်သာ, တရားမျှတမှုပေါ်လာထားခြင်းနှင့် togados မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သစ္စာဖောက်ကာကွယ်, အများဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား, လနျ့စရာအလှနျပင်ကိုယ်မူလထူထပ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအပြစ်ပေး ဂျင်း Alain Rodriguez Sanchez, ရှေ့နေချုပ် rep ။ ဒိုမီနီကာအဆိုပါကျွန်း၏ Fusion ကိုများအတွက်အသိဥာဏ်အလုပ်လုပ်နိုင်သူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးအမိန့် retention ကိုထုတ်ပေးသောကာလပတ်လုံး, သငျသညျဥပဒေရေးရာ shoehorn က de facto နှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဘားနောက်မှာသူ့အခွင့်ထူးခံအဆင့်အတန်းကြမ်းတမ်းနိုင်ငံရေးသမားများတစ်စီးရီးအဖြစ်မရှိမဖြစ်အဖြစ်လိုအပ်သောအဖြစ်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည် နှင့်အခြားပထမဦးဆုံးအီကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကိန်းဂဏန်းများနိုင်ငံအတွင်းခိုလှုံ, ဒါမှမဟုတ်ယခုမှောင်မိုက်အရိပ်ရှိနိုငျသောစီမံကိန်းတစ်ခုကို clean up တစ်ခုအတွေးအခေါ်ရှင်ကင်ဆာသဘောတူကြသည်ဘူးသောသူတို့၏အမျိုးအစနစ်တကျကျပ်ကိုင်သုံးပြီးနယ်စပ် ကျော်လွန်. တစ် macabre အစီအစဉ်ကိုကျင်းပကြသည်ကိုဖမ်းယူ ဒါပေမယ့်မနက်ဖြန်ကအကြောင်းပြချက်များနေရောင်တို့က illuminated နိုင်ပါသည်။
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 22: 43
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 37
အမှတ်ဟေတီအမှိုက် RD နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်
Daniely သူ says:
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 18: 45
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံလူ့ဖြစ်ခြင်းမှတပါးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်သို့မဟုတ်ဟေတီသို့မဟုတ် Emos စပိန်ဟေတီယူနိုက်တက်စတိတ်2ကြိမ်တီနှင့်ဒိုမီနီကန်ကနေလွတ်မြောက်လာငါတို့ရှိသမျှသည်ဋဝေစုကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောမဖွစျနိုငျမည်သူမဆိုပါဘူးကျွန်းသည်မိမိနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်နှင့် fucione ဟေတီရနေပါတယ် တိုင်းပြည်သင်ဒိုမီနီကန်ထင်မြင်ချက်မပေးခင်နှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်တင်ဆောင်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ် Dom kerer ပထမဦးဆုံးမေးလျှောက်မဖြစ်သင့်
ကျနော်တို့ဟေတီအတွက်အခမဲ့နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုပြဿနာများကိုပြေလည်နေကြသည်တီမဟုတ် dominocana သမ္မတနိုင်ငံများမှာ
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 19: 36
အဘယ်သူမျှမကိုယ်စားလှယ်။ Dom အကြမ်းဖက်မှုရန်။
Rolando Almonte သူ says:
16 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 17: 56
အရာကိုယ်စားလှယ်။ Dom တစ်ဦးဆက်သွယ်ပြောဆို, ဟိုဆေးအလင်းကဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, သူအတော်လေးကြောင်းယဉ်ကျေးမှုအရစပိန်ထံမှအမွေဆက်ခံသူ, သို့မဟုတ်သင် Solitsriosinvisible နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှမေ့မပြောခဲ့ပါဘူးအဘယျသို့ စပိန်နိုင်ငံတွင်, သင့်တိုင်းပြည်, ကိုယ့်ညီလာခံအားဖြင့်မပယ်ရှားခဲ့သည်။
သငျသညျဟေတီနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ဆက်ဆံရေးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်: Echo, အဆုံးစွန်သောကျော်လွန်သင်ကျနော်တို့ဟာအီတီပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်ကဘာလဲပြောပိုင်ခွင့်ပေးမထားဘူး။
စပိန်အစိုးရကလက်ထောက်မှဘော်လျှင်, အခြားနိုင်ငံသားများမှ၎င်း၏ falsity ကိုတိုးချဲ့
22 ဧပြီလ 2018 37
ဒီartículoTweetElအစိုးရ Share IU ကိုမှလိမ်: အကြီးတန်းအစောင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများငှားရမ်းထားလျှင်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Securities မှ Market ကကော်မရှင် (CNMV) ၏သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပုဂ္ဂလိကကာကွယ်မှု Novosegur ငှါးပြီ, [ ... ]
18, ဇွန်လ 2018 2
အဆိုပါဒုက္ခကိုမေ့လျော့ဖို့ဒီartículoTweetOccidente, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မကောင်းသောအလီယံ Share သူတို့ကိုနှောင့်နှေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဘယ်သူမှဆက်ဆံဖို့ဘာမှမဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအနောက်နိုင်ငံများကဤအာဏာရှင်တွေဆန့်ကျင်သစ်တစ်ခုစစ်တိုက်နှဲဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါနဲ့ [ ... ]